Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny Minisitra Bartlett dia nitarika ny fivoriamben'ny UNWTO manan-danja
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Jamaika • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News
Hifantoka amin’ny fanavaozana, ny fanabeazana, ny fampandrosoana ny ambanivohitra, ary ny andraikitry ny fizahantany amin’ny fampandrosoana iraisan’ny rehetra ny fivoriambe. Fanampin'izany, ny fandaharana dia ahitana ny fankatoavana ny tolo-kevitra fanitsiana ny UNWTO Affiliate Membership Legal Framework, ny UNWTO Students' League finals, ary ny fanendrena ny Sekretera jeneralin’ny UNWTO ho an'ny vanim-potoana 2022-2025.
“Hanasongadina ny fifaninanana amin'ny horonan-tsary ihany koa ny hetsika, izay ahitana sokajy roa: Tales Exceptional of Tourism Resilience and Tourism Promotion and the Decade of Action. Ny Fihaonambe no fihaonan’ny UNWTO ary toerana ho an’ireo firenena mpikambana handray ny fandaharan’asa sy ny teti-bolan’ny UNWTO ho an’ny taona 2022-2023”, hoy ny minisitra.
Ny UNWTO dia manana firenena mpikambana 159, ary ny Fihaonambe no fikambanana faratampony amin'ny UNWTO. Ny fotoam-pivoriana mahazatra dia atao isaky ny roa taona ary manatrika ny solontena avy amin'ny mpikambana feno sy mpiara-miasa.
“Ny Fivoriambe no fivoriana manakiana indrindra ataon'ireo tompon'andraikitra ambony momba ny fizahantany sy ireo solontenan'ny sehatra tsy miankina ambony eran-tany. Io no fihaonan'ny UNWTO ary mivory mba hankatoavana ny tetibola sy ny fandaharan'asa ary ny adihevitra momba ny lohahevitra manan-danja amin'ny sehatry ny fizahantany, "hoy ny minisitra Bartlett nanazava.
Fizahan-tany any Jamaika Ny minisitra Bartlett dia tokony hiverina any amin'ny nosy amin'ny 5 Desambra 2021.